Writ० लेखन त्रुटिहरू जुन सताउन ब्लगरहरू Martech Zone
Writ० लेखन त्रुटिहरू जुन सताउने ब्लगरहरूमा जारी छ
बिहीबार, अक्टुबर 1, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो क्यारियरमा समयहरू थिए र जब म कलेज जाँदै थिएँ कि मैले मेरो लेख्ने क्षमतामाथि प्रश्न गरे। धन्यबाद, ब्लगिging नजिकै आयो र (प्राय: पाठकहरू) उनीहरूको पढ्ने मापदण्ड घटाए। पाठकहरु धन्यवाद dangling सहभागिहरु, विभाजित infinitives, hmonyms, transitive verbs, prepositions, सापेक्ष सर्वनाम, र बस सादा गूंगा हिज्जे त्रुटिहरु को साथ त्रुटिहरु पछाडि स्क्यान गर्दैछन्।
यो विगतमा सत्य थिएन, तर हामी अब सबै पेशेवर लेखक छौं। एक दिन त्यो गएन कि बजारहरूले ब्लग पोष्ट, प्रेस विज्ञप्ति, ह्वाइटपेपर, केस स्टडी र ईमेल लेख्नुपर्दछ! तपाईंलाई लेख्न भुक्तान गरिएको छ ... के तपाईं यी सामान्य गल्तीहरू गर्दै हुनुहुन्छ?
ड्याlingलिles्ग सहभागीहरू - जब तपाईं एक वाक्य लेख्नुहुन्छ र वाक्यमा एक धारा एक सम्बन्धित छ जुन यो उद्देश्यको लागि होईन।
होमोनेमहरू - ती शब्दहरू हुन् जुन उस्तै उही, फरक हिज्जे, र बिभिन्न अर्थहरू छन्। यो सम्भवत: सबैभन्दा सामान्य लिखित त्रुटि हो जुन मैले बनाएको छु।
स्प्लिन्ट इन्फिनिटिभहरू - तब हुन्छ जब एक क्रिया विशेषण को बेयर इन्फिनिटिभ बीच राखिएको छ (जस्तै। to साहसका साथ जानुहोस्।
ट्रान्जिटिभ Verbs - एक क्रियापद जुन एक विषय र वस्तु चाहिन्छ।
तैयारी - वाक्यमा अन्य शब्दहरु लाई संज्ञा, सर्वनाम र वाक्यांशहरु लाई लिंक गर्नुहोस्।
सापेक्ष सर्वनाम - सापेक्ष सर्वनाम हो त्यो, को, कसलाई, को, को, कहाँ, कहिले र किन। तिनीहरू एउटा जटिल वाक्य बनाउनको लागि खंडहरूमा सामेल हुन प्रयोग गरिन्छ।
हिज्जे - हिज्जेजाँच, कोही?
म प्रत्येक पटक कुञ्जीपाटीमा बसेर मेरो लेखन सुधार गर्न चाहन्छु। म अंग्रेजीका यी बारीहरू जान्न चाहन्छु। म पूर्ण रूपले निश्चित छु कि म हरेक अन्य पोस्टमा त्रुटि बनाउँछु… सायद अझै बढि। म यसको कदर गर्छु यदि तपाईंले मलाई इमान्दार राख्नुभयो र टिप्पणी छोड्नुभयो भने म आफैंलाई धेरै पटक अप्ठ्यारो पार्दिन। 🙂
थप विज्ञापन बिना, यहाँ शीर्ष writing० लेखन त्रुटिहरू छन् (विराम चिह्नहरू बाहेक) जुन म दोषी छु वा अन्य साइटहरू मार्फत पहिचान गरेको छु। Gram व्याकरणात्मक त्रुटिहरू जसले तपाईंलाई लाटो देखिन्छ ब्रायन क्लार्क द्वारा मलाई प्रेरणा जारी छ!
Common० साझा लेखन त्रुटिहरू
विज्ञापन वा थप गर्नुहोस्
प्रतिकूल वा उल्टो
सल्लाह वा सल्लाह
प्रभाव वा प्रभाव
धेरै वा धेरै
अमोरल वा अनैतिक
एक भाग वा थप
निश्चित गर्नुहोस् वा सुनिश्चित गर्नुहोस् वा बीमा गर्नुहोस्
भ्रम वा भ्रम
केही बेर वा केही समय
केन्द्रापसारक वा Centripetal
साइट वा साइट वा दृश्य
कोलोकटेड वा कलोकेट
पूरक वा प्रशंसा
कम्पोज गर्नुहोस् वा लेख्नुहोस्
अन्तस्करण वा सचेत
काउन्सिल वा सल्लाहकार
आश्रित वा निर्भर
मरुभूमि वा मिठाई
रुचि छैन वा रुचि छैन
स्पष्ट वा अवैध
इम्ब्रियस वा इम्ब्र्रास
एन्टोमेलोजी वा एटिमोलजी
सोधपुछ वा सोधपुछ गर्नुहोस्
सुनिश्चित वा बीमा
हरेक दिन वा हरेक दिन
टाढा वा बढि
फ्लान्ट वा फ्लउट
यहाँ बनाम सुन्नुहोस्
यो वा यसको हो
जान्नुहोस् वा अब
ले वा झूट बोल्नुहोस्
लुज वा हराउनु
हराएको वा पराजित
मिलिट वा मिटिगेट
सशुल्क वा सशुल्क
अभ्यास वा अभ्यास
प्रिन्सिपल वा प्रिन्सिपल
जुनसुकै वा बेकारको
स्टेशनरी वा स्टेशनरी
भन्दा वा पछाडि
तिनीहरू, त्यहाँ वा उनीहरू
को, चाहिँ, हुन सक्ने वा चाहिएको थियो, हुनुपर्दछ, हुनुपर्‍यो?
कहाँ वा हामी कहाँ थियौं?
कुन वा त्यो
को वा कसलाई
तपाईंको वा तपाईं? पुनः
तपाईं वा म वा म
यदि तपाईं थप पढ्न चाहानुहुन्छ भने, मैले पावल ब्रायनको वेबसाइटमा लेख्ने त्रुटिहरूको सबैभन्दा विस्तृत सूचीहरू फेला पारे।
म दैनिक पात्रो पनि लिन सक्छु। २०१० अंग्रेजी प्रयोगहरू दैनिक बक्सि Daily क्यालेन्डरमा सामान्य त्रुटिहरू। यो अब मेरो ईच्छा सूचीमा छ!
म टिप्पणीहरू पढ्नको लागि उत्सुक छु। के मैले यस पोष्टमा पनि त्रुटि गरें?
टैग: व्याकरणव्याकरण त्रुटिहरुलेखन त्रुटिहरू
कुन काम तपाइँको ग्राहक लाई तपाइँको उत्पादन वा सेवा प्रदर्शन गर्न चाहिन्छ?
कोसँग तपाई काम गर्न चाहानुहुन्छ?
अक्टूबर २१, २०१ at २:०1 बिहान
तैयारीहरू प्रायः लेखकहरूको सामान्य पानीलु हुन्। स्वदेशी अंग्रेजी स्पिकरहरू पनि यो प्रतिबद्धको लागि जिम्मेवार छन्।
अक्टूबर २०, २०१ at २:1० अपराह्न
धन्यवाद कर्नेल जेफ! भाषा कत्तिको गाह्रो छ यदि व्यक्तिहरूको सबैभन्दा शिक्षित व्यक्तिले यो मास्टर गर्न सक्दैन? र हामी प्रत्येक आप्रवासीहरू आएर यो सिक्ने आशा गर्दछौं ... हुनसक्छ हाम्रो अपेक्षाहरू अलि बढी छन्!
धन्यवाद कर्नेल जेफ! भाषा कत्तिको गाह्रो छ यदि व्यक्तिहरूको सबैभन्दा शिक्षित व्यक्तिले यो मास्टर गर्न सक्दैन? र हामी प्रत्येक आप्रवासी आएर यो सिक्ने आशा गर्दछौं? सायद हाम्रो अपेक्षाहरू अलि बढी छन्!
राम्ररी भनिएको। म भन्न सक्दिन कि म पूर्ण रूपमा निर्दोष छु जब यो गलत हिज्जेमा आउँदछ। त्यहाँ दिनहरू छन् जुन मँ एक रिफमा जान्छु र हिज्जे जाँच गर्न पनि सोच्दिन! यसो भनिरहेको छैन कि यो आकर्षक छ, तर मलाई ब्लग पोष्टहरूमा अब र फेरि केहि हिज्जे त्रुटिहरूमा केही फरक पर्दैन। यसले देखाउँदछ कि हामी मानव हौं, र म निश्चित छु कि त्यहाँ संपादक छैन जुन मैले त्यहाँ राखेका सबै कुरा प्रूफरीडिंग गर्दैछ: ०)
डग, मेरो तेस्रो कक्षाको शिक्षकले मलाई त्यो सम्झन सिकायो कि मरुभूमि वा मिठाईलाई सम्झनको लागि जब डेजर्टमा दुई अक्षरहरू हुन्छन् "s"b/ c स्वादिष्ट व्यवहार पसिना बालुवाभन्दा दुई गुणा राम्रो हुन्छ। यसो नभन कि तपाईले मबाट कहिले पनि केही सिकेन! 😉
अक्टूबर २०, २०१ at २:2० अपराह्न
यस सूचीका लागि धन्यबाद, DK। http://bit.ly/LvNMv मैले लेख्ने त्रुटिहरू मैले देखेको भन्दा सामान्यतया औंल्याउँदिन, जबसम्म म पहिले नै व्यक्तिलाई जान्दिन। मेरो आफ्नै ब्लगमा २ कम्तिमा त्रुटिहरू कम गर्दैछ। 🙂 bit.ly/AbLe2
अक्टूबर २१, २०१ at २:०5 बिहान
पोष्टका लागि धन्यबाद। म स्वभावैले व्याकरण र हिज्जेको बारेमा अत्यन्तै पिक्की हुँ (यद्यपि मानवको रूपमा पनि म गल्ती गर्छु)। त्यसकारण, म यो सूची हेर्न पाउँदा खुसी छु। मैले सूचिमा केही थप सुझावहरू दिनु अघि, तपाईंले अनुरोध गरे जस्तै म तपाईंलाई "इमानदार रहन" चाहन्छु।
१) दोस्रो अनुच्छेदमा, म विश्वास गर्दछु तपाईको भनाइको मतलब "एक दिन त्यो बजारमा जाँदैन नगर्नुहोस् लेख्नु पर्छ "तर मैले भर्खरै वाक्य गलत लेखेको हुन सक्छ।
२) तपाईंले "स्प्लिट इन्फिन्टिभ्स" सूची आईटममा क्लोजिंग प्यारेन्थेसिस छुटाउनु भयो (पनि, प्राविधिक रूपले संक्षेप "" "" अवधिहरू द्वारा अलग गरिएको मानिन्छ)।
अब, केहि अन्य चीजहरू थप्नको लागि मैले नियमित आधारमा ध्यान दिएँ:
१) किनेको र ल्याइएको - धेरै व्यक्तिलाई लाग्छ कि "किन्नुहोस्" को विगतको काल "ल्याइएको" हो र यसले मलाई पागल बनाउँदछ जुन मैले देख्दा।
२) पनि, र दुई (विश्वास गर्न सक्दैन कि तपाईंको सूचीको बाहिर छोडियो)।
)) बहुवचन / एकवचन असहमति - म यसमा आफैं निरन्तर दोषी हुँ, तर सबै भन्दा साधारण गल्ति भनेको "उनीहरू," "उनीहरू" वा "तिनीहरु" को एकल विषयको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नु हो। "तिनीहरू" "तिनीहरू" र "तिनीहरूका" सबै बहुवचन हुन्, त्यसैले उनीहरूले बहुवचन संज्ञालाई बुझाउनु पर्छ।
)) "म कम ख्याल गर्न सक्दछु" को सट्टा "म कम ध्यान दिन सक्दिन।"
)) तपाईंको नम्बर onto१ मा थप्नको लागि, म खडा गर्न सक्दिन जब मैले शब्दहरू "अनियमित" लेख्छन् (जस्तो कि यो वास्तवमै शब्द हो)।
साथै, मँ यो प्रस्ट पार्न चाहान्छु कि (कसैलाई परवाह छ भने) कि यसले मलाई एकदमै ब्याटि चलाउँदछ जब म मान्छेले सजावटका साथ वाक्यहरु अन्त्य गरेको देख्छु। बोलेको शब्दहरू सुन्दा मलाई यसले त्यति चिन्तित गर्दैन, तर म यसलाई लिखित रूपमा उभिन सक्दिन।
अक्टूबर २०, २०१ at २:6० अपराह्न
यो जाँचको लागि धन्यबाद। प्रत्येक ब्लगरले पोस्ट गर्नु अघि पढ्नु पर्छ।
किन थाहा छैन, तर अन्य व्यक्तिको पोष्टहरूमा गल्तीहरू याद गर्न यो सँधै सजिलो देखिन्छ।
अक्टूबर २०, २०१ at २:8० अपराह्न
लेखकहरूले गर्ने साधारण गल्तीहरू मेरो लागि होमोनाम र हिज्जे त्रुटिहरू हुन्। मैले २०१० मा अंग्रेजी पुस्तक दैनिक बाक्सि English क्यालेन्डरमा सामान्य त्रुटिहरू जाँच गरेको छैन तर म निश्चित छु कि यसले लेखकले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण तर मूर्ख गल्तीहरू छन्।
पिट भ्यान ओस्ट्रम
खैर, संख्या २ अ number्कको उपसेट हो।
यद्यपि म एक मूल अंग्रेजी स्पिकर होईन म प्राय: यिनीहरू मध्ये धेरै देख्छु र म ती धेरै निराश पार्छु, विशेष गरी जब नेटिभ अ English्ग्रेजीहरु द्वारा बनाइन्छ।
अक्टूबर २०, २०१ at २:16० अपराह्न
के तपाईंलाई थाहा छ # 8 र # 26 उस्तै हो? त्यसो भए, प्राविधिक रूपमा, यस सूचीमा 49 are मात्र छन् ;-)
के म तपाईको रुचि शिखरबाट चुहिन लिनलाई चाहान्छु?
मेरो घरपालुवा जनावर ल्याउने र लिनको लगातार दुरुपयोग हो। तिनीहरू स्पष्ट रूपमा फरक अवधारणा हुन्। धेरै व्यक्ति "" आउँनुहोस् "र" जानुहोस् "को दुरुपयोग गर्दैनन् र दिशात्मकता" ल्याउनुहोस् "र" लिनुहोस् "मा समान छ।
अति उत्तम सूची ... राम्रोसँग सम्पन्न भयो। तर जबसम्म तपाईं पॉल ब्रायनको साइट उद्धृत गर्नुहुन्छ (त्यहाँ मैले के गरें?), तपाईं सजग हुनुपर्दछ कि विभाजित इन्फिनिटिभहरू वास्तवमा गल्ती होइन - तिनीहरू केवल पर्याप्त चीज हुन् जुन पर्याप्त व्यक्ति दृढ विश्वास गर्दछन् गल्ती हो (म अंग्रेजीलाई दोष दिन्छु) शिक्षकहरू) कि तपाईंले प्रत्येक पटक सम्पूर्ण बहस नगर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तो प्रकारले मलाई दु: ख दिन्छ किनकि यसले झुठो नियम सिकेका व्यक्तिहरूले आफुलाई बदमाश हुन दिइरहेका छन् तर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि, हेर्नुहोस् - तपाईं भर्खरै इन्फिटिभन्ट्स नियम तोड्दै हुनुहुन्छ भन्दै मिथ्या बनाउँदै हुनुहुन्छ।
नोभेम्बर २०, २००। 5::2009 अपराह्न
व्याकरण अझ महत्त्वपूर्ण छ भनेर ठान्ने धेरै व्यक्तिहरू भेट्टाउँदा खुशी छ।fम मेरो ल्याटिन प्रोफेसरलाई सही सम्झन्छु, विभाजित infinitives को धारणा विचारको स्कूलबाट उत्पन्न हुन्छ जुन सबै चीजहरूलाई ल्याटिनेटको मान गर्दछ। ल्याटिनमा तपाईले आफ्ना इन्फिनिटिभहरू विभाजित गर्नुहुन्न, त्यसैले तपाईले तिनीहरूलाई अंग्रेजीमा विभाजित गर्नु हुँदैन! LOL
सम्बन्धित ट्यान्जेन्टमा यसले अमेरिकाको र राष्ट्रमण्डलका देशहरूको स्कूलले भित्री सर्कल बाहिरका आवेदकहरूले टोफेल लेख्न जोड दिन्छ भनेर केहि कुरा (मलाई थाहा छैन के हो भनेर थाहा छैन) सिकाउँदछ। मैले पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूका लागि विश्वविद्यालयमा उपचारात्मक अंग्रेजी व्याकरण र रचना सिकाएको छु, तिनीहरू सबै यहाँ क्यानाडामा हुर्केका थिए, जहाँ म बस्दछु। यदि ती विद्यार्थीहरूले TOEFL लेख्नु थियो भने, म शंका गर्थें कि हामी कहाँबाट को छ भनेर क्रमबद्ध गर्न कडा दबाब दिइन्थ्यो।
पढिरहनुहोस्, @ स्कुबागर्ल १15 ... मलाई पक्का विश्वास छ कि तपाईंसँग मेरो लागि पाठहरू प्रशस्त हुनेछ। Me र मलाई सच्याउन संकोच नखोज्नुहोस्, म टिप्पणी पढिरहेको भन्दा गूंगा महसुस गर्छु तर 5,000,००० भन्दा बढी मेरो त्रुटिहरू अनलाइन देख्दै गएको देखिन्छु!
जुन २,, २०१ बिहान :5:२२ बिहान
यस लेखका लागि धन्यबाद!
अन बोन चेक-अप !! Chacha ब्लोगिगुरहरु र nombreux il sont devraient se lire avant de पोस्टर लेखहरु।
Nmoanmoins, il est vrai qu'avec un oeil extérieur on voit Toujours les fautes des autres et दुर्लभ लेस siennes 😉